Inona ny sakan'ny pejy tsara indrindra? | Martech Zone
Inona ny sakan'ny pejy tsara indrindra?
Alatsinainy, 8 Jona, 2009 Zoma, Jona 20, 2014 Douglas Karr
Ny famolavolana tranokala sy ny fametrahana ny sakan'ny pejin-tranonkala ho amin'ny sakan'ny optimum dia resaka iray mendrika hatao. Betsaka aminareo no nahatsikaritra fa nanova ny haben'ny famolavolana bilaogiko tato ho ato aho. Natosiko hatramin'ny 1048 teboka ny sakan'ny pejy. Ny sasany aminareo dia mety tsy miombon-kevitra amin'ilay hetsika - fa te-hizara statistika vitsivitsy aho sy ny antony nanosika ahy hamaky ny sakany.
1048 teboka dia tsy isa nahy.
Nisy fiantraikany lehibe roa tamin'ny fanitarana ny sakan'ny pejiko:
Youtube dia manolotra habe embed lehibe kokoa ankehitriny. Raha tsindrio ny fitaovana kely eo amin'ny sisin'ny pejy amin'ny pejy Youtube dia omena safidy ianao ho an'ny habe lehibe kokoa ary koa ny lohahevitra. Satria lasa toerana iraisana amin'ny Youtube ireo horonan-tsary famaritana avo kokoa, dia te hampiditra ireo horonantsary ireo amin'ny bilaogiko aho ary hampiseho azy ireo amin'ny antsipiriany araka izay azoko atao (nefa tsy handany ny sakan'ny pejy manontolo).
Ny doka mahazatra dia misy sakany 125, 250 ary 300 pixel ny sakany. 300 teboka dia toa mipoitra misimisy kokoa amin'ny tranokala fidiram-bola ary te hampiditra azy ireo tsara ao amin'ny sisintanako aho.
Ary mazava ho azy, misy padding eo ankavia sy ankavanan'ny pejy, ny atiny, ary ny sidebar… noho izany ny isa majika dia 1048 teboka ho an'ny lohahevitra nomeko:
Nojereko ve ny statistikan'ny mpamaky ahy?
Eny Mazava ho azy! Raha toa ka mihazakazaka ny efijery vahaolana ambany kokoa ny ankamaroan'ny mpitsidika ahy dia azo antoka fa nanana eritreritra faharoa momba ny fanitarana ny pejy aho.
Taorian'ny famoahana ny valin'ny efijery avy amin'ny fonosako Analytics (Ao amin'ny Google dia ny mpitsidika azy> Ny fahaizan'ny mpitety> Fanapahan-kevitry ny efijery), dia nanangana takelaka Excel momba ny valiny aho ary namoaka ny sakany tamin'ny sehatry ny vahaolana.
Google dia manome vahaolana ho 1600 × 1200, noho izany dia mila alainao ny zava-drehetra avy eo ankavanan'ny "x", ampitomboina 1 mba hahitana valiny isa mba hahafahanao mandamina midina eo aminy, avy eo manao SUMIF ary jereo hoe firy ny fitsidihana lehibe kokoa na ambany noho ny sakan'ny endrika jerenao.
= ANKA (A2, mahita ( "X", A2,1) -1) * 1
Hafoiko ve ireo mpamaky 22% izay manana vahaolana kely kokoa? Tsia mazava ho azy! Ny zavatra mahafinaritra momba ny layout miaraka amin'ny atiny ankavianao sy ny sisinao ankavanan'ny dia azonao atao ny miantoka fa ny atiny dia mbola ao anatin'ny sakan'ny ankamaroan'ny mpizaha. Amin'ity tranga ity, 99% ny mpamaky ahy dia mihazakazaka mihoatra ny 640 teboka ny sakany, ka tsara aho! Tsy tiako ho diso anjara tanteraka amin'ny sisiny izy ireo, fa izay no faharoa amin'ny atiny.
Tags: aclarkautoresponderChrisVanCalling coldmpamaly mailakakylelacydoka mifandrayfampielezan-kevitra mikolokolovarotra crmvarotra prospectingvarotra mandeha ho azy varotradoka ara-tsosialy
8 Jun 2009 amin'ny 7:20 AM
Manolotra soso-kevitra hybrid aho ary sakan'ny boaty CSS 100%. Raha mbola manana sakany voafetra ho an'ny sidebar ianao, ny lohan-doha, footer ary faritra misy ny atiny lehibe dia hampifanaraka hifanaraka amin'ny sakan'ny efijery. Fenoy 100% ny fikandrana fitetezan'ny tsirairay, na inona na inona fanapahan-kevitry ny mpanara-maso. Avy eo dia tsy mila manisa pixel intsony ianao na manara-maso ny statistikan'ny mpampiasa momba ny valin'ny monitor.
Jun 8, 2009 ao amin'ny 12: 22 PM
Tena tiako ny layout hybrid, Bob - saingy indrisy fa tsy milalao tsara indraindray izy ireo amin'ny tena atiny. Mety kamo aho, fa mora kokoa amiko ny mahafantatra fa ny max sy ny min dia 640px ao amin'ny tranokalaniko. Ny famelarana dia sarotra torontoronina rehefa manoratra ireo lahatsoratra aho.
Preferansa manokana fotsiny no eritreretiko!
Jun 8, 2009 ao amin'ny 12: 17 PM
Raha ny tena izy dia ekeko ny fehin-kevitrao, fa raha mampiasa habe miorina tsy miova aho dia fetra hatramin'ny 960 teboka ny sakany.
Ny iray dia mila mitaky bara-tsipika mitsangana sy bara hitsin-dàlan'ny browser hafa izay manana sakany fanampiny. Amin'ny fijanonana ao anatin'ny 960 teboka, dia mahazo toky ianao fa tsy misy fikororohana ankavia miankavanana amin'ny famahana ny efijery 1024 piksel.
Misaotra an'ity lahatsoratra ity Doug. Izaho dia miasa amina lamina vaovao (midadasika) ho an'ny Bilaogy Indiana Insider ary ity lahatsoratra ity no tena nilaiko!
Jul 13, 2009 amin'ny 4: 35 AM
tena hafahafa. Ao amin'ny Firefox, ny tranokalanao dia manana scrollbar marindrano amin'ny 1048, ary tsy manana fijery madio mandra-pivoakanao hatramin'ny 1090.
Misaotra noho ny statistika tsara na dia tamin'ny fanapahan-kevitra Google aza
Sep 2, 2009 ao amin'ny 3: PM PM
Satria manana ny anao ianao napetraka amin'ny 1048px, ny tranokalanao dia miteraka bara horonan-taratasy marindrano amin'ny efijery 1024. Heveriko fa tsara kokoa ny manaisotra 100px amin'ny sakan'ny (sy padding) an'ny sidebar sy ny faritra misy anao ka mifanaraka amin'ny 728 × 1024 izany. Izay no fomba fanao tsara indrindra ankehitriny.
Ny tranga tokana manohitra an'io dia raha manohana an'io ny isa nomerao… fa satria tsy nanome izany angona izany tao amin'ny lahatsoratranao ianao dia lazaiko fa lesoka ny firafitry ny pejy.
24 Nov 2009 amin'ny 12:51 maraina
Izaho izao dia manana monitor 15 'miaraka amina vahaolana 1024 × 768, mahita bara mitsivalana aho ary halako.
28 Feb 2012 tamin'ny 10:36 maraina
Tsy ny olon-drehetra no mampiasa ny varavarankely rehetra amin'ny efijery feno - raha ny tena izy dia aleoko mikarama kely.
Manana ny bilaoginao amin'ny rivotra 80% aho… ary eo izy, tsipika fanakodia marindrano
Ary inona no eo amin'ny efijery… avelao mba… tsy hisy.
Tsy misy dikany àry ilay tsipika fitetezanao.
Fomba iray mora very ny mpamaky !!
28 Mey 2012 tamin'ny 1:49 hariva
Ny atiny dia miompana amin'ny pejy @ heenan73: disqus, manome izay ilain'ny mpamaky izay ilainy. Raha very mpamaky aho satria samy afaka mahita ny atiny ARY mahita tsipika marindrano… tsy azo antoka fa izy ireo no mpamaky tadiaviko. Azo antoka fa misy zavatra tsy manam-paharoa ao anaty ny atiny izay manosika azy ho 1217px ka hanaraka izany aho ary hanamboatra azy. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana momba ny lohahevitra teo aloha. Misaotra nitondra izany ho ahy!